မြန်မာဒီမိုကရေစီကွန်ဂရက် Myanmar Democracy Congress: September 2011
NLD မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ပြင်းထန်စွာကန်.ကွက်သွားမည်
ဗ-က-ပ ကတော့ NLD ကို နည်းပရိယာယ် အသစ်ချမှတ်ဖို. အကြံပြုနေပြန်ပါပြီ။ ဘာလုပ်ရမှာလည်းလို.တော့ တိတိ ပပ မပြောပါ။ တိတိပပ ကိုလည်း မီဒီယာမှာ ပြောစရာမလိုပါ။ NLD က ကွန်မြူနစ်တွေကိုပြော လိုက် ရုံ ပါ ပဲ။ မြန်မာပြည် နိုင်ငံရေး မှာ ဖိုးသံချောင်း၊ ဦးဝင်းတင်နဲ. ဒေါ်အောင်ဆန်းစု ကြည်တို. အသံတွေ တူနေသရွေ.တော့ ဘယ်တော့မှ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ၁၉၈၈ ကတည်း က ကွန်မြူနစ်တွေ ဟာ သူတို.ရဲ့မူဝါဒတွေအောင်မြင်ဖို. ဒေါ်စုကို အသုံးချခဲ့ကြတာပါ။ သူတို.ရဲ့လုပ်နည်းလုပ်ဟန်က ပထမ အဆင့်အစည်းဝေး ခန်းပြင်ပမှာ ဒေါ်စုကို နားသွင်းပါတယ်။ နားရည်ဝလောက်ပြီဆိုမှ အစည်းဝေးမှာတင်ပြ နောက်တော့ ဒေါ်စု က၀င် ရောက်ထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး အတည်ဖြစ်ခဲ့ရတာပါ။ ဒီလိုနဲ.ပဲ ဒေါ်စု ပထမဆုံး အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ အာဏာဖီဆန်ရေးလမ်းစဉ် ၁၉၈၉ မှာဖြစ်လာခဲ့ရတာပါ။အာ ဏာဖီဆန်ရေးလမ်းကြောင်းကို အန်တီစု ကပဲချမှတ်ခဲ့သယောင် ဦးဝင်တင်က RFA မှာပြောခဲ့ပါသေးတယ် မအောင်မြင်တဲ့ မူဝါဒ ကိုဒေါ်စုခေါင်းပေါ်ပုံချတာပါ။ နောက်ဆုံးကတော့ ပါတီမှတ်ပုံမတင်ရေး ရဲရဲတောက်တွေ နားသွင်းပြီး NLD ကိုနိဂုံးချုပ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အန်တီစု နားဝင်အောင်လည်း မီဒီယာတွေမှာ ကွန်မြူနစ် တွေက ၀ါဒမျိုးစုံဖြန်.ပေးပါတယ်။ အန်တီစု အကျယ်ချုပ်ကနေ နားဆင်နိုင်အောင်ပေါ့။ သက်ဆိုင်ရာ ဘီဘီစီ၊ ဗီအိုအေ အစရှိတဲ့ အသံလွှင့်ဌာနက လူတွေကလည်း နိုင်ငံရေးသမားတွေမဟုတ်တော့ဘယ်သိပါ့မလဲ။ ဒီမိုကရေစီ အမှန် တရားလက်ကိုင်ထား တယ်ဆိုတော့ ၂၀၁၀ ဆန်.ကျင်ရေး အသံလွှင့်ပေးလိုက်ကြတာ NLD ပါပျက်ပြီး ကိုယ့်တပ်ကိုယ်ပြန်နင်းတဲ့ကိန်းဆိုက်ခဲ့တော့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူတို.မှာလည်း အပြစ်မရှိပါဘူး။ သူတို.က သာမန်ပညာတတ်မျိုးချစ်တွေပါ။ နိုင်ငံရေးသမားတွေမဟုတ်တော့ မှန်တယ်ထင်ရာအသံလွှင့်ရင်း အခုလိုတွေဖြစ်ကုန်ကြတာပါ။
ဒီလိုပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ ပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အန်တီစု က သူများပြောတာနားထောင်ပါ့မလား ဆိုတာ မေးစရာဖြစ်လာမှာပါ။ အန်တီစု က ပညာတတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်မ ဟုတ်လေတော့ နိုင်ငံရေးသမား လူလယ်တွေရဲ့ အသုံးချတာကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ NLD က ကွန်မြူနစ်တွေကိုမေးကြည့်ပါ။ အားလုံးက အန်တီစု ဟာ နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူးလို.ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ အခြားသော ကွန်မြူနစ်မဟုတ်တဲ့ NLD က လူကြီးများကိုမေးကြည့်ပါ။ သူတို.ကလည်းဒီတိုင်းပဲပြောပါလိမ့် မယ်။ နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လဲလို.မေးစရာရှိပါတယ်။ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ အန်တီစု ဟာ နိုင်ငံရေး သမားတစ်ယောက်မဖြစ်လည်း နိုင်ငံရေးလုပ်လို.ရပါတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် အန်တီစု သာနိုင်ငံရေး သမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ လူလယ်နိုင်ငံရေးသမားတွေအသုံးချတာ ခံရစရာ အကြောင်းမရှိ တော့ဘူးပေါ့။
နောက်ဆုံးအကြိမ် အန်တီစု ရဲ့ရွေ.ကွက်တွေဟာ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့စတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ အန်တီစု ဟာ တစ်ချိန်တုန်းက အခုလို အကွက်မျိုးမရွေ.တတ်ပါဘူး။ အခုတော့ သူဟာအတွေ.အကြုံများသူပီပီ ဦးဝင်းတင် သဘောမတူတဲ့ ကြားထဲက ရွေ.ကွက်သစ်တွေကို ကစားနေတာပါ။ အန်တီစု က နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်လေတော့ UN ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့ လူ့အခွင့်အရေးစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကိုထောက်ခံတာမျိုး နဲ့ဧရာဝတီကိစ္စမှာ ၀င်ပါမိလိုက်ရတဲ့ ပညာတတ် တစ်ယောက်ရဲ့ လုပ်ဟန်မျိုးလည်း တွေကို တွေ့မြင် နေရ ပြန်ပါ တယ်။ ဧရာဝတီအရေးဟာ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းလိုရေးထက် အစိုးရကို အကြပ်အတည်းဖြစ်စေ ဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ကစားကွက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ဧရာဝတီပန်ကြားလွှာကို အန်တီစု ကိုယ်တိုင် တင်ပြလာတော့ ထာဝရအမှန်တရားလိုဖြစ်ပြီး အဆိုတော်တွေရော၊ စာရေးဆရာတွေရော၊ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် ကိုကျော်သူပါမကျန်ဝင်ပါစေခဲ့သော အစိုးရနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့ စတဲ့ နိုင်ငံရေး ကစား ကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အန်တီစု နာမယ်နဲ့ကြေငြာတဲ့ ဧရာဝတီပန်ကြားလွှာကို ဘယ်သူရေးပေးခဲ့သလဲ၊ ဒါကိုထုတ်ပြန်ဖို့ အန်တီစုကို ဘယ်သူက နှပ် ကြောင်းပေးခဲ့သလဲ။ ကွန်မြူနစ်တွေက ဧရာဝတီကို အကြောင်းပြပြီး လူထုတိုက်ပွဲဖြစ်လာနိုး လှုံဆော်ဖို.ကြိုးစားနေကြတာပါ။ (ကွန်မြူနစ်တွေပြောသလို မြစ်ဆုံဆည်ကြောင့် ဧရာဝတီတကယ်ခမ်းသွားမယ်ဆိုတာ သေချာရင် ဆက်ပြီးတော့သာ မြန်မြန် ဆောက်ခိုင်းလိုက်စမ်းပါ။ မြစ်ကြီး တကယ်ခမ်းသွားရင် အစိုးရ ပြဿနာတကယ်တက်ပြီပေါ့။)
နေပြည်တော်က ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်တာ၊ ဘောလုံးပွဲသွားကြည့်တာ၊ အပြောင်းအလဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြော လိုက်တာ၊ တိုင်းရင်းသားများအရေး သူပါဝင်မယ်လို့ကမ်းလှမ်းတာ၊ နေပြည်တော်အရောက်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး ကိုလည်းတွေ့ချင်တဲ့အကြောင်းတွေပြောတာ။ သမ္မတ ကတော်နဲ့တွေ့တာ။ စသည်ဖြင့်တို့ ဟာ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်သာလျှင် ရွေ့တဲ့အကွက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ အန်တီစု ဟာ တစ်ချိန်က ဒီလို အကွက်မျိုးတွေ ကစားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ အန်တီစု "Grand Master" တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါပြီ။
မက်စ်ဝါဒ ဟာ တရားသေမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အယူအဆအရ နည်းပရိယာယ်တွေဟာ အမြဲတန်းပြောင်းနေရမယ် ဆိုတဲ့ မူဝါဒ ကို ဗ-က-ပ နဲ့ မြန်မာပြည်က ကွန် မြူနစ် တွေက လက်ခံ ပါတယ်။ မက်စ်ဝါဒ က တရား သေမဟုတ်ဘူးလို့နားသွင်းခံရပြီး ဘာမှန်းညာမှန်းမသိ ကွန်မြူနစ်ဖြစ်သွားသူ လူငယ်တွေ လည်း အများအပြားရှိပါ တယ်။ ဗ-က-ပ ခေါင်းဆောင်တွေဟာ ဥရောပမှာပညာသင်နေတဲ့ သူတို့သားသမီးတွေကို တရုပ် မြန်မာနယ်စပ် သံဆူးကြိုးဝိုင်းထဲက ဗ-က-ပ ဌာနာချုပ် ကိုခေါ်ပြီး မက်စ်ဝါဒ ဟာ တရားသေမဟုတ်ကြောင်း သင်ပေးပြီး မြစ်ဆုံရေကာတာကိုကန့်ကွက်ဖို့ မြန်မာပြည်ထဲကိုပြန် လွှတ် သင့်ပါတယ်။
အန်တီစု က NLD နှစ်ပတ်လည်မှာ မပြောင်းလဲဘူး ဆိုတာမျိုးဟာ NLD ရဲ့မူဝါဒ မဟုတ်ဘူးလို့ပြော ခဲ့ပါတယ်။ ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကိုတော့ ဦးဝင်းတင်ကလက်ခံခဲ့ပါတယ် ကွန်မြူနစ်အယူအ ဆနဲ့တစ်ထပ်တည်းကျလို့ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုရှိတာကတော့ ပြောင်း လဲ ရမယ်ဆိုတာ ကွန်မြူနစ် တွေ သာလျှင် လက်ခံတဲ့အယူအဆတော့မဟုတ်ပါဘူး။
NLD ကမပြောင်းလဲပဲ ဆက်လက်ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့မူဝါဒ ကတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမူဝါဒပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးမူဝါဒ ဟာ ဟုတ်သယောင်ယောင်နဲ့ အလုပ်မဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်နေခဲ့တာ ပါ။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကို တောင်းဆိုစရာမလိုပါ။ နည်းနာအချို့ကိုပြင်လိုက်ရင် စကားပြောခန်းက အလိုလို ရောက်လာမှဖြစ်ပါတယ်။ နည်းနာအချို့ကိုပြင်ပြီး စကားပြောခန်းရောက်အောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကို ကွန်မြူနစ် တွေကမလုပ်တတ်ပါဘူး။ သို့မဟုတ်လည်း လုပ်လေ့မရှိပါဘူး၊ ကွန်မြူနစ်ရဲ့အလုပ်က တိုက်ပွဲနဲ့ အောင်ပွဲပဲ ရှိပါတယ်။ အန်တီစု က တစ်ချိန်တုန်းကတော့ တိုက်ပွဲနဲ့ အောင်ပွဲအကြောင်းပြောလေ့ရှိပါတယ်။ အခုတော့ သိပ်မပြောတော့ပါဘူး။
အန်တီစု လုပ်ရမဲ့အလုပ်က တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ တိုက်ပွဲလည်းမဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါတီမှာ နာယက အဖြစ်ဝင်ရောက်ဦးဆောင်ပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ လအနည်းငယ် ကတည်းက အန်တီစု ကို ကျွန်တော်တို့ကမ်းလှမ်းထားခဲ့ပါတယ်။ (၂၉- ၇-၂၀၁၁) နေ့စွဲနဲ့ ယခုဘလောက်စာမျက်နှာမှပြန်လည်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူအပြောခံ (သို့) နိုင်ငံရေး သေရင်သေပစေ အမှန်တရားကိုပဲပြောမယ်ဆိုပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်နိုင်ငံရေးကို ပါဝင်ဖို့ အရင်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့ သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ အခုမှ NLD ကဦးဥာဏ်ဝင်းက မီဒီယာမှာ စစ်အစိုးရဟာပြောင်းလည်းလာ သယောင်ရှိလို့ ပဲမှတ်ပုံပြန်တင်တော့မလိုလိုပြောလာပါပြီ။ အခုလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ကကြိုသိလို့ ဒီလမ်းကိုလျှောက်ခဲ့ကြတာပါ။ နိုင်ငံရေးဟာ ဘယ်အကွက်ရွှေ့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ ကြိုမြင်နိုင်သူတွေပဲလုပ်သင့်ပါတယ်။ ဒါကို သာမန်ပညာတတ်တွေ မသိနိုင်ပါဘူး။ နိုင်ငံရေးသမားတွေ သာသိနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုသိတဲ့အသိမျိုးကို နိုင်ငံရေးသမားပညာ လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဗီဇ စိတ်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်၊ သင်ယူလို့မတတ်မြောက်နိုင်ပါဘူး။ (ကျွန်တော်တို့ပါတီဥက္ကဌနဲ့ အန်တီစု ရက်ပိုင်းအတွင်းက တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။)
အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို ဆန့်ကျင် တာ ဟာ မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာ အလွန်လွယ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခု အဖြစ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ခက်ခဲတာက အစိုးရရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေထဲက ဘယ်အချက်ကို လက်ခံမလဲဆိုတာက ခက်ခဲတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ပါတီဟာ ခက်ခဲတဲ့ မူဝါဒတွေကိုပဲချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ခက်ခဲတဲ့မူဝါဒကို ချမှတ်တယ်ဆို မှတော့ အလွန်ကိုပဲမလွယ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍များ NLD ကိုမှတ်ပုံပြန်တင်ခဲ့ရင် သမိုင်းမှာ အလွန်မှားယွင်းတဲ့အမဲစက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ မှတ်ပုံပြန်တင်ခဲ့ရင် အန်တီစု မျက်နှာနဲ့ NLD က လူရှုပ်တွေ အာဏာ ရပြီး သမိုင်းအလွန်နာပါလိမ့်မယ်။ အခုလာမဲ့ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကိုမှတ်ပုံတင်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာမျိုးမလုပ်ဖို့ အန်တီစု ကို အထူးပဲမေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါတယ်။ အန်တီစု ကျွန်တော်တို့ပါတီကို ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ရံပုံငွေ ထည့်ဝင်ပါရန်လည်း တောင်းခံလိုက်ပါတယ်။
NLD ဟာ ပါတီမှတ်ပုံပြန်တင်မယ်ဆိုရင်တော့အောက်ပါအချက်များကိုမလွဲမသွေလုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။
၁။ တစ်ချိန်က မှတ်ပုံမတင်ခဲ့တာ မှားယွင်းကြောင်း ပြည်သူတွေနဲ့ အခြားမှတ်ပုံတင်ခဲ့တဲ့ ပါတီများကိုဝန်ချတောင်းပန်ပါ။
၂။ မှတ်ပုံမတင်ဖို့ရဲရဲတောက် တင်ပြခဲ့ကြတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင် များကို ပါတီဦးဆောင်မှုမှ ထုတ်ပယ်ပါ။
၃။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးကြိုးပမ်းသူတွေကို မဲမထဲ့ဖို့ လှုံ့ဆော်ခဲ့တာ မှားယွင်းတဲ့မူဝါဒ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ၀န်ခံပါ။
၄။ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေးကြိုးပမ်းတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို မဲထဲ့ကြဖို့ ပြည်သူများကို မေတ္တာရပ်ခံပါ။
၅။ လာမဲ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ လုံးဝ ၀င်မပါပါနဲ.။
၆။ ပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများပြန်လည် ၀င်ရောက်လာစေဖို့ နိုင်ငံတကာကို ဖိတ်ခေါ်ပါ။
၇။ NLD ကိုပြန်လည်မှတ်ပုံတင်တာထက် ၂၀၁၀ မှာ မှတ်ပုံတင်ခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေ ကိုပါဝင်စေပြီး အမျိုးသားကွန်ဂရက် သဘောသက်ဝင်တဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ရပ်ကိုတည်ထောင်ပါ။ (ပါတီငယ်တွေကို ဖြည်းဖြည်းခြင်း ဖျက်ပေါင်းပေါင်း စေဖို့ခွင့်ပြုနိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။)
၈။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကို မျိုးဆက်သစ်များနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ပါ။
၉။ လမ်းပေါ်ထွက် နိုင်ငံရေးကိုတတ်နိုင်သမျှရှောင်ရှားဖို့ မျိုးဆက်သစ်များကို ဆွေးနွေးပါ။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 7:30 AM0comments Links to this post
ကချင်ပြည်နယ် ရှိ လီဆူတိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာဓလေ့ကိုလေ့လာပါ
Details Category: [LINK=/ဆောင်းပါး/ယဉ်ကျေးမှု.html]ယဉ်ကျေးမှု[/LINK] Published on Saturday, 19 February 2011 16:48 Written by Nu Pan/KNG
မြန်မာစစ်အစိုးရမှ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားတွင် စီစဉ်ကျင်းပတဲ့ ကချင်မျိုးနွယ်စု လီဆူရိုးရာပွဲတော်။ ဓါးသွားလှေကားထစ် ပြင်ဆင်နေပုံ။
ကချင်မျိုးနွယ်စု လီဆူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဟာ ခရစ်ယာန်အဖြစ်ပြောင်းလဲလာကတည်းက နှစ်အတော်ကြာ “နတ်ပူဇော်ကျင်းပတဲ့ရိုးရာ” တွေကို လျစ်လျူရှုမေ့ပျောက်နေခဲ့ကြတာပါ။
ဒီယဉ်ကျေးမှုတွေကို ကချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနား အာဏာပိုင်တွေနဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ရိုးရာမပပျောက်သွားအောင်လို့ နတ်ပူဇော်ကိုးကွယ်ဆဲဖြစ်တဲ့ တရုတ်ပြည်က လီဆူလူမျိုးတွေနဲ့ တနိုင်ငံလုံးကလီဆူးများအားလုံးကိုခေါ်ယူပြီး စီစဉ်ကျင်းပနေကြောင်း ဒေသခံကတွေက ပြောပါတယ်။
မိရိုးဖလာနတ်စားကာလက ကျင်းပခဲ့ကြတဲ့ လီဆူမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ ရိုးရာဓလေ့ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ ချွန်ထက်တဲ့ဓါးသွား ၅၀ ထက်မနည်းနဲ့ လှေကားထစ်လုပ်ထားတဲ့အပေါ် နတ်ပူးတက်ပြတဲ့ပွဲကို နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်နဲ့ပူးတွဲ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်းဟာ ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ကျင်းပနေတာဖြစ်တယ်လို့ ပါဝင်ခဲ့သူ ဒေသခံလီဆူအမျိုးသမီးက ပြောပါတယ်။
မကြုံဖူးဘူး အဲဒါသိသလောက်တော့သွားကြတာပဲ။ နတ်ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတော့ ဒီမှာတော့မရှိတော့ဘူးလေ တရုတ်ပြည်ဘက်မှာ ပဲရှိကြတာကော။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒီမှာဓါးတက်ပွဲလို့ပြောတယ်လေ ဒီညကျတော့ မီးနင်းမယ်လို့ပြောတယ်။ စော်ဘွားမျိုးရိုးတွေမှ တက်လို့ရတယ်တဲ့ ကျန်တဲ့အမျိုးတွေက တက်လို့မရဘူးလို့ပြောတယ်။ အခုဒီနတ်ပူဇော်တာတွေဘာတွေကတော့ တရုတ်ပြည်ကလာတဲ့ လူတွေပဲလုပ်တာ ဒီကလူတွေကမလုပ်ဘူး။ အခုမီးနင်းတယ်ဆိုတာတွေ၊ လှေကားတက်တယ်ဆိုတာတွေ အကုန်လုံးက တရုတ်ပြည်က လာတာလေ။ တရုတ်ပြည်က လူခူးဘက်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့အရာရှိကြီးပေါ့ လီဆူထဲမှာအကြီးဆုံးတွေက လာပြီးမှ ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးမှ လုပ်တာလေ။
ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ရိုသေကိုင်းရှိုင်းကြတဲ့ လီဆူလူမျိုးတွေကို အခုချိန်မှာမှနတ်စားခေတ်က ရိုးရာတွေပါထိန်းသိမ်းအောင် အာဏာပိုင်တွေက တိုက်တွန်းပြီးအားပေးအားမြှောက် သီးသန့်ခွဲထုတ်လုပ်ကျင်းပပေးခြင်းဟာ အဓိကရည်ရွယ်ချက် ရှိနေတယ်လို့ ကချင်တိုင်းရင်းသားထုရိုးရာကော်မတီအဖွဲ့ ကပြောပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုရင် ကချင်တိုင်းရင်းသားထုစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီနဲ့ ခုလိုရိုးရာပွဲတော်တွေ အတူတကွလုပ်လေ့ရှိပေမယ့် အာဏာပိုင်တွေက ကော်မတီကို ပါဝင်ပတ်သက်ခွင့်မပေးပဲ လီဆူလူမျိုးများအဖြစ် သီးသန့်ခွဲထုတ်ပြီး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းဟာ အချင်းချင်းညီညွတ်မှုမရှိအောင် လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်ပြောပါတယ်။
“ဒီပွဲဟာ သူတို့အစွမ်းအစနဲ့လုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဓါးသွားကိုလှေကားထစ်လုပ်ပြီးတက်တယ် သလောက်ချွန်ထက်တဲ့ ဓါးသွားပေါ်မှာဘယ်လိုလို့သာမာန်လူက တက်နိုင်မှာလဲနတ်နဲ့လုပ်တာလေ။ နောက်ပြီး ခေါင်းပေါ်မှာအသီးတင်ထားပြီး လေးပစ်တာတို့ပါတယ်လေ ဒါကလီဆူတွေ တရုတ်ပြည်မှာပဲလုပ်ကြတာ။ သူတို့ရဲ့ရိုးရာကိုချီးမြှောက်ပေးတယ်ဆိုတာ ကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် အတူတကွပူးတွဲပြီးလည်း လုပ်လို့ရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။ တကယ်လို့ သူတို့ ယဉ်ကျေးမှုပွဲတော်ဆိုရင် တိုင်းရင်းသားထု ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီနဲ့ ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ရတာ။ အမှန်ဆို မနောဝင်းကြီးမှာတောင်လုပ်လို့ရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပွဲကတော့ သွေးခွဲအောင်စစ်အစိုးရက အားပေးပြီးလုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်။”
လတ်တလော ကချင်တိုင်းရင်းသားများထဲက လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ ကချင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဖွဲ့ (KIA) နဲ့ မြန်မာစစ်တွေကြား ပဋိပက္ခဖြစ်နေချိန်ဖြစ်ပြီး အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်ချိန် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးမှုအင်အားနည်း လာအောင် လူစုခွဲစည်းရုံးနေခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ဒေသခံနိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူများကမြင်ပါတယ်။
ခုလိုစစ်အစိုးရရဲ့ သွေးခွဲတဲ့စနစ်ဟာလည်း မြန်မာနိုင်ငံက တိုင်းရင်းသားများအားလုံးမှာရှိနေကြသလို ခုလီဆူနဲ့ ကချင်ကြားထဲမှာလည်း ဘာမှမပတ်သက်ပါဘူးဆိုတဲ့ မတူညီတဲ့ရိုးရာတွေနဲ့ စိတ်ဝမ်းကွဲအောင်စည်းရုံးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ကချင်လူငယ်ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ကခုလိုအမြင်ကိုသုံးသပ်ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အမြင်နဲ့ပြောရရင် ဒါကရှင်းပါတယ်။ အစိုးရရဲ့သွေးခွဲတာ အမျိုးမျိုးကြုံနေရတာက ကျွန်တော်တို့ ကချင်ထဲမှာပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတိုင်းမှာ ဥပမာ ကရင်မှာဆိုရင်လည်း စကောကရင်၊ ပိုးကရင်ကရင်ဗုဒ္ဒ၊ ကရင်ခရယာန်ဆိုပြီး ခွဲခြားသလိုမျိုးပဲ ကျွန်တော်တို့ကချင်မှာလည်း ဘာသာရေးမှာရော ယဉ်ကျေးမှုမှာရော အဲလိုမျိုးအမျိုးမျိုး အခုလီဆူ တိုင်းရင်းသားပွဲလုပ်တယ်ဆိုတာက ဒီယဉ်ကျေးမှုကိုအားပေးတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုကို ဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာက ကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် ဒီလီဆူတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ခံယူချက်ကသူတို့လုပ်ပေးတယ် အဲလိုမျိုးပဲသူတို့မြင်မှာ ဟိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တော့သူတို့မြင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ပွဲလုပ်ရရင်ကျေနပ်နေမှာပဲ။ ဒီနအဖအစိုးရက သူတို့ကိုသွေးခွဲတာ ပြီးတော့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှာ အများကြီးပါလာအောင် သူတို့စည်းရုံးတာ အဲလိုမျိုးပေါ့။ သူတို့ရဲ့မူအရ လုပ်သွားတယ်လို့ပဲ ကျွန်တော်မြင်တယ်။
ပွဲတော်အတွင်း အံ့သြဖွယ်ဓါးသွားလှေကားထစ် တက်ပြနေပုံ။
မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ကချင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုဖြစ်ကြတဲ့ ရ၀မ်နဲ့ လီဆူလူမျိုးတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ကချင်ထဲကဖယ်ထုတ်ပြီး သီးသန့်ပါတီဖွဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပြီးရ၀မ်လူမျိုးထဲမှလည်း ဦးအဒန်ကို ရ၀မ်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့အဖြစ် လက်နက်ရိက္ခာ ကူညီထောက်ပံ့ပေးပြီး ပူတာအိုမှာ တပ်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါတယ်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုကော်မတီက ဦးစီးပြီး တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးမှုခွန်အားဖြစ်စေတဲ့ ကချင်ပြည်နယ်နေ့ မနောပွဲတော်ကိုလည်း ဒီနှစ်မှာကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့နဲ့ အာဏာပိုင်ခေါင်းဆောင်းများက စစ်တပ်အင်အားသုံးပြီး ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့အတွက် အရင်နှစ်တွေလိုလူထုကတက်ကြွစွာပါဝင်မှုမရှိပဲ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေခဲ့ရတယ်လို့ ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
အာဏာပိုင်တွေက ခုလိုတိုင်းရင်းသားရိုးရာပွဲတော်တွေကိုဦးဆောင်ကျင်းပတယ်ဆိုလို့ နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာထဲက ကူညီပေးခြင်းမဟုတ်ပဲ ငွေကြေးတတ်နိုင်သူများအပါဝင် လူထုများဆီကအဓမ္မကောက်ခံမှုတွေနဲ့ ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုကျင်းပနေတဲ့ လီဆူရိုးရာပွဲတော်အတွက်လည်း ကောက်ခံမှုတွေရှိတယ်လို့ ဒေသခံလီဆူးအမျိုးသမီးက ပြောပါတယ်။
“သူတို့ရံဘုံငွေလည်း ကောက်တယ်တဲ့။ မုဆိုးမဆီမှာလည်း မရှိဘူးဆိုရင်လည်း ကျပ် ၅၀၀ လောက်ပေါ့နော် အဲလိုမျိုးကောက်ပြီး မှ လုပ်တယ်လို့ပြောတယ်။ ရှိတဲ့လူက သောင်းငွေ၊ သိန်းငွေပေါ့နော် မရှိတဲ့လူက ငါးရာတစ်ထောင်ပေါ့နော် အဲလိုမျိုးကောက်တယ်လို့ ပြောတယ်။”
ဒါပေမယ့်ခုလိုပွဲတော်မျိုးကို မကြုံခဲ့ကြတဲ့လီဆူတိုင်းရင်းသားတချို့တွေအတွက်ကတော့ အားရကျေနပ်ပြီး လီဆူလူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာနဲ့ ဓလေ့ကိုလူများပိုသိလာပြီး ထင်ပေါ်တဲ့မျိုးနွယ်စုတမျိုးဖြစ်လာမှာကို လိုလားတယ်လို့ပြောပါတယ်။
“အခုလီဆူရိုးရာဆိုတော့ လီဆူးတွေကဘယ်လောက်တိုးတက်တယ် လီဆူတွေပညာတတ်တာ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ် ဆိုတာပြခန်းတွေမှာ ပြထားတယ်လေ။ ဘော်လုံးသမားတွေက ဘယ်လောက်၊ ဆရာဝန်တွေကဘယ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်၊ နောက် အားကစားသမားတွေက ထူးချွန်တဲ့လူကဘယ်လောက်ပေါ့၊ ပြီးရင် အဆိုတော်တွေဘာညာပေါ့နော် ပြီးရင် အရင်တုံးက စစ်တိုက်တဲ့အချိန်ပါခဲ့တဲ့ သူရဲကောင်းတွေအကုန်လုံး ပြခန်းမှာပြထားတာပေါ့နော်။ လီဆူလူမျိုးတွေလည်း သူများလူမျိုးတွေ လည်း ပိုပြီးမှ ပိုသိလာတာပေါ့။ အရင်ကတော့ လီဆူလူမျိုးဆိုရင် လူတွေအကုန်လုံးက အထင်သေးတာ ပေါ့နော်။ အခုကအဲလိုမျိုး တစ်နှစ်တစ်ခါပွဲကျင်းပပြီးမှ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်လေ။”
ဒီလိုပွဲတော်ကို မြစ်ကြီးနားမြို့လယ် ရမ်ဘိုရပ်ကွက် ခေမာသီရိမှာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ကနေ ၁၈ ရက်နေ့အထိ ၄ရက်ကြာ ကျင်းပပြီး အာဏာပိုင်များဖက်ကမြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်ဇေယျာအောင်နဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အမတ်သိန်းဇော်တို့ တက်ရောက်အားပေးကြည့်ရှုခဲ့ကြတယ်လို့ ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ တနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ လီဆူလူမျိုးများအပြင် မြစ်ကြီးနားက ဒေသခံပေါင်းစုံ ဓါးတက်ပွဲကို စိတ်ဝင်စားသူ ၂သောင်းကျော်ခန့်လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 2:33 AM0comments Links to this post
ပါတီဥက္ကဌ ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ်နှင့် အဖွဲ.၀င်များ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်တွေ.ဆုံ
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 10:39 AM0comments Links to this post
မြန်မာပြည်မှာ ဆင်းရဲမွဲတေမှုပြဿနာရဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်းတွေထဲမှာ သယ်ယူပို.ဆောင်ရေး စရိတ်စက ကြီးမြင့်တာက ထိပ်ဆုံးကပါဝင်ပါတယ်။ သိန်းပေါင်းထောင်ချီနေတဲ့ ကားတန်ဘိုးတွေကို ကာမိအောင် ကား ခတွေမြှင့်တင်ထားရတယ်ဆိုတာ သံသယရှိစရာမလိုပါဘူး။ ကားတစ်စီးရဲ့တန်ဖိုးက မြင့်မားသလို ကားအပို ပစ္စည်းများရဲ့တန်ဘိုးလည်း မြင့်မားလွန်းလို. ကားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်ကလည်း မသေးလှပါဘူး။
ကားဈေးတွေ ကြီးမြင့်ရတာကတော့ စစ်အစိုးရရဲ့ သွင်းကုန်ဆိုင်ရာမူဝါဒများကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခရီးသည် တင်ယဉ်တစ်စီး သိန်း ဆယ်ဂဏန်းကနေ ထောင်ဂဏန်းဖြစ်လာတာ ကို ခါးဆီးခံရသူက ပြည်သူများပဲဖြစ်ပါ တယ်။ ဇိမ်ခံကားတွေ ဈေးမြင့်မားမှုကိုလည်း ပြည်သူပဲခံစားရတာပါ။ ဆင်းရဲသားပြည်သူကားမစီးနိုင် လို. သူတို.နဲ.မဆိုင်ဘူးလို.ပြောလို.မရပါဘူး။ မြန်မာပြည်သူတွေဟာ လူသုံးကုန်ပစ္စည်းမျိူးစုံကို ကမ္ဘာ.ပေါက်ဈေး ထက် အဆများစွာဈေးကြီးပေးဝယ်သုံးနေရပါတယ်။ ခေတ်အဆက်အဆက်ဖြစ်ပါတယ်။
တည်ဆဲအစိုးရနေနဲ. သွင်းကုန်ဆိုင်ရာမူဝါဒတွေကို လုံးလုံးလျှားလျှား ပြင်ဆင်သင့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ ပြည်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်အတွင်း ပြည်တွင်းမှာ ကားထုတ်လုပ်မှုများ မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ခေတ်မမှီတော့တဲ့ သွင်းကုန်အစားထိုးရေးမူဝါဒတွေကို ကျင်သုံးလာတာကိုလည်းတွေ.ရပြန်ပါ သေးတယ်။ ကားထုတ်လုပ်သူလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ. စစ်အစိုးရလက်ထက် ဗိုလ်ချုပ်များ နဲ.ဆက်ဆံရေးပြေ လည်မှုကလည်း ကားတင်သွင်းခွင့်တွေကို တင်းကြပ်စေခဲ့ပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များရဲ့ အစုရှယ်ရာတွေ ကား ထုတ်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီတွေမှာ ပါဝင်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီကလည်း ကားထုတ်လုပ် မှု ရှယ်ရာ အများဆုံးပိုင်ဆိုင်သူတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နည်းပညာ အဆင့်မမှီရင် ကားဝယ်သုံးသူတွေဟာ နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့ကားကိုပဲ ၀ယ်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။ သွင်းကုန်အစားထိုးရေးမူဝါဒကြောင့် ပြည်တွင်းကားထုတ်လုပ်မှုတွေကို ကာကွယ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြ ချက်နဲ. ပြည်ပ ကားတင်သွင်းမှုကို ပိတ်ပင်တာက နောက်ဆုံးအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးကွက်စီးပွားရေးမှာ အဆင့်မမှီရင် ယှဉ်ပြိုင်လို.မရနိုင်ပါဘူး။ ပြည်သူတွေဟာ အဆင့်နိမ့်ပြီး ဈေးကြီး တဲ့ ပစ္စည်းတွေကို ၀ယ်ယူသုံးစွဲရမယ်ဆိုရင် ဆင်းရဲမွဲတေမှုကို ဘယ်တော့မှ တိုက်ဖျက်နိုင်မယ်မဟုတ်တော့ပါ ဘူး။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 5:30 AM0comments Links to this post
အိန္နိယ နိုင်ငံရဲ.လျှပ်စစ်ထုပ်လုပ်မှု သတင်းကိုလေ့လာပါ
အိန္နိယ နိုင်ငံကတော့ လျှပ်စစ်ကိစ္စအတွက် နျူဓါတ်ပေါင်းဖိုတွေဝယ်ယူမယ်လို.ဆိုပါတယ်။ မြန်မာ့ ပတ်ဝန်း ကျင်ဝါဒီများ က လျှပ်စစ်ကိစ္စအတွက်မည်သို.များစီစဉ်ထားသလဲဆိုတာ သိသာစွာတင်ပြနိုင်ဖို.လိုပြီဖြစ်ပါ တယ်။ ဧရာဝတီအတွက် ဒေါသထွက်နေသူများအနေနဲ. ဧရာဝတီ မှာ ရေကာတာတည်ဆောက်ရင် မြစ်ကြီး ခန်းခြောက်သွားမယ်ဆိုတာ ပညာရှင်များနဲ. သေခြာစွာ သုတေသနလုပ်ပြီးမှ ပြောဆိုသင့်ပါတယ်။ ဆိုလိုခြင် တာက ခြောက်ခန်းနေတဲ့မြစ်မှာ လျှပ်စစ်ထုတ်လို.မရဘူးဆိုတာထင်ရှားတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
မြစ်ဆိုတာ လျှပ်စစ် ထုတ်လို.ရနေရင်ခမ်းခြောက်တိမ်ကောဖို.ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ မြစ်ထဲက ရေကို စိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်သုံးစွဲမယ်ဆိုရင်တော့ မြစ်ရေခမ်းခြောက်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခုသဘာဝပတ် ၀န်း ကျင် ၀ါဒီများရဲ့ တင်ပြချက်က ကွဲပြားစွာတည်ရှိနေပါတယ်။
၁။ ထုတ်လုပ်တဲ့လျှပ်စစ်ဟာ တရုတ်ကိုရောင်း ခြင်းကိုမကျေနပ်ခြင်း။
၂။ ပြောင်းရွေ. ဌာနေ ရွာသူရွာသားများ အတွက် အခွင့်အရေး။
၃။ ရေကာတာရဲ့ ရေလွှမ်းဧရိယာအပေါ် စိုးရိမ်မှု။
၄။ ဧရာဝတီမြစ်ကြီး တိမ်ကောမည်ဟူသည့် အယူအဆ။
၅။ သဘာဝ သားငါးများပြုန်းတီးမှု စတဲ့အယူအဆများဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအထဲမှာ ဧရာဝတီကို တိမ်ကောစေမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကအပြင်းထန်ဆုံးလို.ယူဆရပါတယ်။ ဘယ်လို ပဲဖြစ်ဖြစ် လျှပ်စစ်ထုတ်လို.ရနေရင် မြစ်ချောင်းဆိုတာ တိမ်ကောလေ့မရှိပါဘူး။ ဧရာဝတီဟာ မိုးတွင်းတိုင်းမှာ ရေလျှံပါတယ်။ မြစ်ကြောင်းတစ်လျှောက်က ရွာပေါင်းများစွာ အိမ်ခြေပေါင်းများစွာဟာ ရေလျှံလေ့ရှိပါတယ်။ စိုက်ပျိုးဧကပေါင်းများစွာရေလျှံပါတယ်။ နွေရာသီဆိုရင်တော့ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေ သဲထုတ်လုပ်မှု၊ မြစ်ကျောက်စရစ်ထုတ်လုပ်မှုများ လုပ်ကိုင်နိုင်ပါတယ်။ ဧရာဝတီမှာ အဓိကတက်နေတဲ့ပြသနာက သောင်ထွန်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရအဆက်ဆက်က သောင်ထွန်းမှုကို မကာကွယ်ခဲ့ပါဘူး။ မြစ်ကြောင်းထိန်း သိမ်းတယ်ဆိုတာ ပိုက်ဆံအလွန်ကုန်လို.မလုပ်နိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
စာရေးသူဟာ ဧရာဝတီမြစ်ထဲမှာ ရန်ကုန်ကနေ မန္ထလေးထိ စုန်ဆန်သွားလာခဲ့ဘူးပါတယ်။ နွေရာသီမှာဆို ရင် သင်္ဘောကြီးတွေ CB လို.ခေါ်တဲ့ ကုန်တင်သင်္ဘောတွေဟာ ရေကြောင်းလမ်းပြနဲ. သွားရပါတယ်။ ပြည်တွင်း ရေကြောင်းပို.ဆောင်ရေးမှာ ရေကြောင်းလမ်းပြတွေခန်.အပ်ထားရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းရေ ကြောင်း တာဝန်ရှိသူ အားလုံးရဲ့တညီတညွတ်တည်း ဆန္ဒကတော့ ဧရာဝတီမြစ်ကို သောင်တူးဖေါ်ပြီး ရေလမ်းကြောင်းထိန်းသိမ်းဖို.ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဧရာဝတီဟာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား အမှန်တကယ်ထုတ်လို.ရတယ်ဆိုရင် တိမ်ကောဖို.ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ နှစ်ပေါင်းသိန်းသန်းချီ စီးဆင်းနေတဲ့မြစ်ကို လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရုံနဲ.တိမ်ကောသွားမယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ပညာရှင်များနဲ. လေ့လာမှုများပြုလုပ်ပြီးမှ သဘောထားထုတ်ပြန်သင့်ပါတယ်။ ဧရာဝတီမှာ ရေကာတာမဆောက်ဖို.ပြောနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဝါဒီတွေဟာ ရေကြောင်းပညာရှင်တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ မသိပဲပြောနေခြင်းဟာ ရှက်ဖို.ကောင်းပါတယ်။ တကမ္ဘာလုံးက ၀ိုင်းကြည့်နေကြတာပါ။
အခုလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်တဲ့ကမ္ပဏီတွေဟာ သေခြာစွာတိုင်းတာပြီး လျှပ်စစ်ထုတ်လို.ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် လာရောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံကြတာပါ။ တည်ဆောက်မှုမှာ မြန်မာပြည်ရဲ့ပိုက်ဆံတစ်ပြား မှမပါ ပါဘူး။ အခု အများ ပြောသလို မြစ်ကြီးတိမ်ကောသွားမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူမှ လာပြီးရင်းနှီးမှုမလုပ်ပါဘူး။
အကယ်၍များ အများပြောသလို မြစ်ကြီးတိမ်ကောသွားမယ်ဆိုရင် ရေကာတာကိုပြန်လည် ဖွင့်လှစ်လိုက်ရုံပါ ပဲ။ အလွန်လွယ်ပါတယ်။
စေတနာရှေ.ထားပြီး ပညာရှင်တွေနဲ.တိုင်းတာမှုမပြုပဲဝေဖန်မှုပြုမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ.အလယ်မှာ ရှက်စရာ ကောင်းပါတယ် ။ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အောက်မှာ အန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ လျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်လိုမှု စီမံချက်သတင်းကို ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ လေ့လာကြဖို.ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်း ကျင်ထိခိုက်တဲ့ကျောက်မီးသွေး ကိုအလွန်အကျွံသုံးစွဲဖို. စီမံချက်ကိုတွေ.ရမှာပါ။ နျူစွမ်းအင်ကိုသုံးဖို့ လဲပါ ၀င်ပါသေးတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ မှာ နျူနည်းပညာမရှိပါ။ ကျောက်မီးသွေးဓါတ်အားပေးစက်ရုံများလည်း မတည်ဆောက်နိုင်သေးပါ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကို သာပထမဦးစားပေးအဖြစ် ရည်မှန်းချက်ထားသင့်ကြပါတယ်။ ရေကာတာ စီမံကိန်းပြီးရင် စစ် အာဏာရှင် ကြီးများလည်း ဇရာထောင်းလို့သေလုမြောပါးဖြစ်နေပါပြီ။
အာဏာ(နာ)ရှင်ကိုတိုက်တာလည်းတိုက်ပါ။ အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားများကို လည်း ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း လည်းနားလည်ဖို.လိုပါတယ်။ ပြည်သူရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို စတေးပြီး အာဏာ(နာ)ရှင်ကိုတိုက်ပွဲဝင်တာ ၂၁ ရာစု နိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်မဟုတ်တော့ပါဘူး။
ကွန်မြူနစ်များက ရဲရဲတောက်တွေ ပြောပြီး လုပ်ဆောင်နေတဲ့ တိုက်ပွဲနည်းဗျူဟာတွေကို ပြည်သူအများနဲ. လူငယ်အများ နားမယောင်ဖို့ နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ဝါဒီများ အသုံးချမခံရစေဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
Posted by MYANMAR DEMOCRACY CONGRESS at 3:10 AM5comments Links to this post
ကချင်ပြည်နယ် ရှိ လီဆူတိုင်းရင်းသားများ၏ ရိုးရာဓလေ့...
ပါတီဥက္ကဌ ဦးကောင်းမြင့်ထွဋ်နှင့် အဖွဲ.၀င်များ ဒေါ်ေ...